ठूला सरकारी अस्पतालमा थोत्रा उपकरण, कुन अस्पतालमा कति पूराना उपकरण ? « Deshko News
ठूला सरकारी अस्पतालमा थोत्रा उपकरण, कुन अस्पतालमा कति पूराना उपकरण ?
उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने उपकरण ३० वर्षभन्दा पुराना छन् । त्यस्ता उपकरणको आयु औसत दुईदेखि पाँच वर्षको हुन्छ । वीर, टिचिङ, सिभिललगायतका अस्पतालले वर्षौं पुराना उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सबैभन्दा पुराना उपकरण टिचिङ अस्पतालमा रहेका छन् । यस्ता उपकरणलाई सबै अस्पतालले विस्थापन गरी अत्याधुनिक उपकरण जडान गर्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ । टिचिङ अस्पतालमा २५ वर्षदेखि अटो क्लेभ मेसिन सञ्चालनमा रहेको छ ।
यसलाई वर्षौँवर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त नभएको प्रा.डा. लोकविक्रम थापा बताउँछन् । ‘उपचारमा जाँदा प्रयोग हुने कपडालाई सफा बनाउन यो मेसिन प्रयोग गरिन्छ । तर, पुरानो मेसिनबाट उल्टै संक्रमण हुन सक्ने अवस्था छ । यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन,’ उनले भने ।